कोरोना अपडेट : विश्वभर ८८ हजार ५ सय भन्दा धेरैको मृत्यु, कुन देशमा कतिको मृत्यु ? | Samabesi Khabar
कोरोना अपडेट : विश्वभर ८८ हजार ५ सय भन्दा धेरैको मृत्यु, कुन देशमा कतिको मृत्यु ?
विश्वका लागि ठूलो स्वास्थ्य चुनौति बन्दै बनेको कोरोना भाइरसका कारण सारा विश्व भर अहिलेसम्म ८८ हजार ५४९ जनाको ज्यान गएको छ भने १५ लाख १९ हजार ५१५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ ।
त्यस्तै विश्वभर ३ लाख ३० हजार ९८३ जना उपचर पछि निको भएका छन् भने विश्वमा यो समाचार तयार पार्दासम्म ४८ हजार ७९ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
कोरोनाले अत्याधिक प्रभावित देश इटालीमा अहिलेसम्म १७ हजार ६६९ जनाको ज्यान गएको छ भने १ लाख ३९ हजार ४२२ जामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ ।
त्यस्तै अमेरिकामा अहिलेसम्म १४ हजार ७९७ जनाको ज्यान गएको छ भने, ४ लाख ३५ हजार १६० जनामा संक्रमण देखिएको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म २०१ जना नयाँ संक्रमित पाईएको छ भने अमेरिकामै आज नै थप ७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
त्यस्तै स्पेनमा अहिलेसम्म १४ हजार ७९२ जनाको ज्यान गएको छ भने १ लाख ४८ हजार २२० जनामा कोरोनाको संक्तमण देखिएको छ ।
त्यस्तै फ्रान्समा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको कारण १० हजार ८६९ जनाको ज्यान गएको छ भने १ लाख १२ हजार ९५० जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ ।
त्यस्तै ब्रिटेनमा अहिलेसम्म ७ हजार ९७ जनाको ज्यान गएको छ भने संक्रमणको संख्या ६० हजार ७३३ जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ ।
त्यस्तै चीनमा आज मात्रै थप २ जनाको मृत्यु भएको छ । चीनमा अहिलेसम्म ३ हजार घ सय ३५ जनाको ज्यान गएको छ । त्यस्तै ईरानमा अहिले सम्म महामारीका कारण ३ हजार ९९३ जनाको ज्यान गएको छ भने संक्रमितको संख्या ६४ हजार ५८८ जनाको ज्यान गएको छ ।
त्यस्तै जर्मनीमा अहिलेसम्म १ लाख १३ हजार २९६जनामा संक्रमण पाइएको छ भने २ हजार ३४९ जनाको ज्यान गएको छ ।
त्यस्तै बेल्जियममा अहिलेसम्म २ हजार २४० जनाको मृत्यु भएको छ भने २३ हजार ४०३ जनामा संक्रमण पाईएको छ । त्यस्तै नेदरल्याण्डसमा अहिलेसम्म २० हजार ५४९ जनामा संक्रमण पाइएको छ भने २ हजार २४८ जनाको मृत्यु भएको छ ।
भारतीय प्रसिद्ध गायक एसपी बालासुब्रमण्यम निधन